Taunggyi Times (တောငျကွီးတိုငျးမျ): 2014
တောင်ကြီးမြို့ ကျောက်တိုင်ကွင်းတွင် Coca-Cola မှ ဂီတဖျောဖြေပွဲပြုလုပ်
Kanbawza Win |3November 2014 | Taunggyi Time
The U.S. has imposed sanctions on Burmese lawmaker and businessman linked to attacks on the country’s democratic opposition. The sanctions, announced just come days before President Barack Obama is scheduled to visit Burma, as part ofagathering of regional leaders. The sanctions will require U.S.-connected firms and individuals to freeze the assets of Aung Thaung,acurrent member of Burma’s lower house of parliament and former industry minister and army officer. 
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ဦးစီးကျင်းပသော “လူငယ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး Forum“ အပေါ် အမြင်သဘောထားနှင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
ဇူလိုင် ၂၉ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခု
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ Myanmar Peace Centre (MPC) မှ ဦးစီးကျင်းပသော “လူငယ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ်” အပေါ် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပါတီများနှင့် နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ အရပ်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထားအမြင်များ။
(၁၄) ရာစု မြောက်ဦးနန်းတော်ကို သမိုင်းရှုထောင့်မှ လှမ်းကြည့်ခြင်း
အမြင်ဆောင်းပါး | ခိုင်လင်း (မေဃ၀တီ)
မေလ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ရခိုင်ပြည်လွှတ်တော်က မြောက်ဦးနန်းတော် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကို တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ သတင်းက သမိုင်းအမြင်အရ တုန်လှုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရခိုင်သမိုင်းပညာရှင်တွေ ၊ ရခိုင်သမိုင်းကို တန်ဖိုးထား သူတွေရဲ့  ကန့်ကွက်မှုကြောင့် ပျက်ပြယ်သွားနိုင်ကောင်းပါရဲ့ လို့ တွေးခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် တလကျော်လာသည့်တိုင် ကန့်ကွက်တဲ့သတင်းတွေ မကြားရတဲ့အခါ သမိုင်းအမြင်အရ ကျွန်တော့်ရဲ့  တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားမှုကို ရခိုင်လူထုအား တင်ပြဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ သမိုင်းရှုထောင့်က တတ်သလောက် တင်ပြပါ့မယ်။
ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ဘန်းယဉ်ရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိများနှင့်ရဲအဖွဲ့ဝင်များသည် ဘန်းယေဉ်ရဲစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရဲဘော်များနည်းပါးနေသဖြင့် နောင်မွန်ကံသာဦး လူငယ်များအား ကံသာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ရဲဘော်စုဆောင်းရေးလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၄ မေလ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ကြောင်း သိရသည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားများသည် သုဝဏ္ဏဘူမိသထုံပြည်တွင် သမိုင်းစဉ်ဆက်အရ မင်းမျိုးနွယ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအရင်ကိုးကွယ်ခဲ့သော လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းဖြင့် တည်ရှိခဲ့သော်လည်း ခွန်မနုဟာမင်းလက်ထက်တွင် ပုဂံမင်းအနော်ရထာက ထီးနန်းသိမ်းပိုက်ပြီးချိန်ကစပြီး ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား များသည် တကွဲတပြားဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ရေကြည်ရာမြက်နုရာပြောင်းရွေ့နေထိုင်လာပြီး ကမ္ဘောဇတိုင်းခေါ် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းသို့ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်သည်က အများစုပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် နဂိုမူလနေထိုင်နေသော ပအိုဝ်းလူမျိုးလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကို သံလွင်မြစ်အရှေ့ဘက်ကျွန်းတွင် နေထိုင်သောပအိုဝ်းလူမျိုးသည် ကွန်လုံပအိုဝ်းဟု ခေါ်သည်။
နန်းခမ်းဟွမ် (မဲုင်းကောင်) | မေလ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၄ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ဟိုပုံးမြို့မြို့မဆည်တွင် အသက် ၁၀ နှစ်ခန့်ရှိသော မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် မေလ ၈ ရက်နေ့တွင် ရေချိုးရာမှ ရေနစ်သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသမီးသမဂ္ဂရုံးတွင် ပအိုဝ်းမီးသားစုတွေဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
ခွန်မွိုင်ကြွိုင် | မေလ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
အမြင်ဆောင်းပါး | စိုင်းခွန်ခမ်း | မေလ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၄ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ကျနော်စာအုပ်ဆိုင်တွေတော်တော်များများရောက်သွားတော့ ယ္ခုတလော ရှမ်းပြည်နိုင်ငံရေးနှင့်ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေ တော်တော်များများတင်ရောင်းလာတာကို စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ သတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ - ခုနှစ်မတိုင်မှီကပင် ထိုစာအုပ်များကို လိုအပ်လို့ပင် မနည်းရှာဝယ်ရသည့် စာအုပ်များ အထူးသဖြင့် ရှမ်းပြည် ဘယ်လဲ? ပင်လုံစစ်တမ်း၊ ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ၊ ……. စသည့်စာအုပ်များ၊ တောခိုကျောင်းသားဟောင်းများရေးသားသည့် ထို့ကြောင့်ဤသို့ စာအုပ်သည်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်အရေးကိစ္စတွေကို အထူးရေးသားထားတဲ့စာအုပ် ကောင်းတွေ ဖြစ်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု သမိုင်းတွင် ရှမ်ပြည်နိုင်ငံရေးသမားများ၏ လှုပ်ရှားမှုများဟုလည်းပြော လို့ရပါသည်။